ရီယိုဒီဂျနေးရိုး - I LOVE RIO DE JANEIRO - နှင့် ပတ်သက်.
I LOVE RIO ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့, ဘရာဇီး၏လှပသောမြို့ရဲ့လူမှုရေး, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းဝင်ထည်ကိုဖုံးအုပ်ထား, တစ်မူထူးခြားတဲ့ဒဿနနှင့်အတူ Portal ကိုဖြစ်ပါတယ်။
မြို့တော်ရဲ့အတိတ်, ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အလားအလာသူတို့ကိုလက်လှမ်းအောင်, အလငျးနဲ့ကစားလမ်းအတွက်ပေးအပ်သည်နှင့်အဝေးကနေထိုင်သူများ, ဧည့်သည်များနှင့်ပရိသတ်များကိုဆွဲဆောင်ကြသည်။ တစ်ဦး, မူရင်းအပြုသဘောနှင့်တိုးချဲ့မှန်ဘီလူးစာဖတ်သူများအဓိပ္ပါယ်ရှိစွာနားလည်နက်နဲသောအရာနှင့် Carioca ယဉ်ကျေးမှု၏ပဉ္စလက်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကူညီပေးသည်။ အဆိုပါဝဘ်ဆိုဒ်ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ယဉ်ကျေးမှု, ဂီတ, gastronomy, လူနေမှုပုံစံစတဲ့, တွေကတော့, ဖက်ရှင်, အားကစား, စီးပွားရေး, သမိုင်း, သတျခဲ့တာပါနှင့် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ပြည်နယ်အနှံ့အများအပြားအမြို့မြို့အပေါ်ဆောင်းပါးများကိုတင်ဆက်တစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီးဖွဲ့စည်းပုံမှာ, သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူတယ်ပါရှိတဲ့နှင့်အမြင်အာရုံသာယာသောအောက်ပါအတိုင်း။ ကျမ်းအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဓာတ်ပုံများအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းခြင်း, အသီးအသီးတင်ဆက်မှုမြင်ကွင်းကျယ်နက်ရှိုင်းမှုနှင့်ရှင်းလင်းမှုနှင့်အတူရီယိုကိုရည်ညွှန်းပြသကြသည်။
အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. 25,000 စာမျက်နှာများတွင်နှင့်အတူငါရီယို Love အသစ်တစ်ခုကိုခရီးသွားဧည့်ယဉ်ကျေးမှုအနက်ကိုကမ်းလှမ်း - ရောနှောဧည့်သည်များနှင့်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်များအပြင်၌, ပေါ်တယ်ကိုဘယ်လိုရှင်းပြ, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အသီးအသီးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပုံကိုပြသဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် ဤအရပျတို့၌ရီယိုရဲ့နေထိုင်သူများ၏ဘဝနှင့်အစဉ်အလာကိုထိခိုက်စေခြင်း, ရီယိုရဲ့အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုကို။
I LOVE RIO ကဤလုပ်ငန်းများနှင့်ပရောဂျက်များအတွက်တာဝန်ရှိအမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တိုက်ရိုက် links တွေကိုပံ့ပိုးဖို့အပြင် - သဘာဝတရား၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနှင့်ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်၎င်း၏သဟဇာတဆက်စပ်သောစီမံကိန်းများနှင့်အစပျိုးအသိပေးနိုင်သည်။ အဆိုပါ Portal ကိုကျယ်ပြန့်သဘောသဘာဝများအတွက်လေးစားမှုအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အထက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အရေးကြီးပုံကိုအလေးပေးသည်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း I LOVE RIO ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏ပြည်နယ် 16 ခုအတွက်တမူထူးခြားတဲ့မြို့များကိုအပ်နှံသည် - ဤအမြို့မြို့အသီးအသီးအဘို့အဝဘ်ဆိုဒ်သမိုင်းကြောင်း, သဘောသဘာဝ, ဒေသခံယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ, အစားအစာနှင့်တည်းခိုခန်း options ကိုအလေးပေး; အဆိုပါ Capital ကိုမှတပါး, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့တစ်ခုလုံးကိုပြည်နယ်နိုင်ငံတကာခရီးသွားဧည့်များ၏အကျိုးစီးပွားတိုးမြှင့်မှာရည်မှန်း။
detected အဘယ်သူမျှမကဗီဒီယိုဖွင့်နိုင်စွမ်းရည်များ။ အဘယ်ကြောင့်အစားဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်ရန်ကြိုးစားသည်မဟုတ်လော
အကြောင်းက 90 စက္ကန့်ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ပါ I LOVE RIO
အဆိုပါ Portal ကိုမဂ္ဂဇင်း, ဓာတ်ပုံပြပွဲလက်ကမ်းစာစောင်များပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အားလုံး၎င်း၏ဂုဏ်အသရေနှင့်မတူကွဲပြားမှုအတွက် Carioca ယဉ်ကျေးမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်အရည်အသွေးမြင့်မားစာအုပ်များအပါအဝင်ထုတ်ကုန်များ၏တစ်အစုစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါအလုပ်ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတင်ထားနှင့်ချဲ့ထွင် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏ပုံရိပ်ကို, အကျော်ကြားဆုံးဒေသများထက်ကျော်လွန်, Re-စိတ်ကူးယဉ်တည်ဆဲအကြံဥာဏ်များနှင့်ယဉ်ကျေးမှု, အနုပညာ, စီးပွားရေးနှင့်စိတ်အားတက်ကြွပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အစပျိုး၏တစ်ဦးထက်ပိုဘက်စုံကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ဆီသို့ဦးတည်ရွေ့လျားဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။ I LOVE RIO အလှတရားများအတွက်ရှာဖွေ ခပ်သိမ်းသော နှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်ယဉ်ကျေးမှု, ဝှက်ထားလျက်ရှိသောဘဏ္ဍာတည်နေရာနှင့်ရှုခင်းအသစ်အလငျးကိုထွန်းလင်း။